कसरी पाउने युके भिषा ? | Mero Life कसरी पाउने युके भिषा ? – Mero Life
कसरी पाउने युके भिषा ?
युईनाईटेड किङ्गडम अर्थात हामीले जनबोलीमा भन्ने गरेको बेलायत आम नेपालीको सपनाको देश भन्दा अतियुक्ती पक्कै नहोला । यो स्वप्न नगरीमा पुग्ने रहर जो कोहिलाई हुनु पक्कै पनि अनौठो होईन । जसका लागि चाहिने युकेको भिषा प्राप्ति सहज भने पक्कै छैन । त्यसैले होला धेरै कमैलाई मात्र युके भ्रमणको अवसर जुर्ने गरेको पाईन्छ । तर, यसका लागि थोरै सजकता अपनाए योग्य ब्याक्तिले भिषा प्राप्त नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।
नेपालमै बेलायती राजदुताबास छ तर नेपाल स्थिती बेलायती राजदुताबासले भिषा सम्बन्धि कुनै पनि कार्यहरु गर्दैन । त्यसैले नेपाली नागरीक वा नेपाल भित्र बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकहरुले युके भिषाको आवेदन भारतको दिल्ली स्थित ब्रिटिस हाईकमिसनमा दिनुपर्छ । जसको सहजताका लागि भिषा आवेदन संकलन केन्द्रको रुपमा भिएफएस ग्लोबल लगनखेललाई तोकिएको छ ।
के हो भिएफएस ग्लोबल
यो भिषा प्रोसेसिङ्ग गर्ने एक बहुराष्ट्रिय निजी कम्पनी हो । जसलाई विभिन्न मुलुकहरुले आफ्नो आवेदन संकलन, अन्तवार्ता तथा डकुमेन्टेसनका लागि प्रयोग गर्ने गर्छन् । भिएफएस ग्लोबलले नेपालमा युके वाहेक अष्ट्रेलिया, क्यानडा, स्पेन, ग्रिस, ईटाली लगायतका मुलुकहरुको भिषा आवेदन सम्बन्धि कार्यहरु पनि गर्ने गर्छ । सम्बद्ध राजदुताबासले दिएको अख्तियारी अनुरुप यसको कार्य क्षेत्र र भूमिका समेत फरक फरक रहँदै आएको देखिन्छ ।
युके भिषाका लागि भिएफएस ग्लोबलको काम भने आवेदन फर्म, कागजाद तथा पासपोर्ट तथा तोकिएको भिषा शुल्क संकलन गरि तोकिएको डाँचामा आवेदकको तस्विर तथा बायोमेट्रिक्स लिनु हो । यसले भिषा प्राप्तिको निर्णयमा कुनै पनि भूमिका खेल्दैन । भिएफएस ग्लोबलले युके भिषा सम्बन्धि कुनै पनि जानकारी पनि दिन सक्दैन ।
युके भिषा आवेदन दिने प्रकृया, आवश्यक कागजाद वा कुनै पनि किसिमको जानकारी प्रप्तिका लागि यसको आधिकारीक वेभसाईट धधध।नयख।गप को साहरा लिनु बाहेक कुनै पनि विकल्प छैन । यसै वेभसाईटको ईन्क्वायरी गएर कुनै सटिक विषय वा प्रश्नको जानकारी लिन सकिए पनि यसले आवेदकलाई खासै सहयोग पु¥याउँदैन । यति सम्म की युके भिषा आवेदन दिएपछी कति दिनमा भिषा प्राप्त गर्न सकिन्छ ? पासपोर्ट फिर्ता आउन कति दिन लाग्छ ? भिषा शुल्क कति बुझाउनु पर्छ ? नगद ल्याउने कि चेक ? तस्विर कस्तो चाहिन्छ जस्ता सामान्य जानकारी समेत कहिं कतै नपाउँदा आवेदक निराश हुनु स्वाभाविक नै हो । यस्ता सामान्य प्रारम्भिक जानकारिको प्रत्युत्तर समेत न त भिएफएस ग्लोबलले दिन्छ न त नेपाल स्थित राजदुताबासले नै दिन्छ । जसको फाईदा उठाउँदै अनाधिकृत शुल्क लिएर काम गर्ने यहाँ कथित कन्सल्टेन्सिहरु पनि प्रसस्तै भेटिन्छन् ।
यसै क्रममा कतिले त मेरो सेटिङ्ग छ वा भिषा ग्यारेन्टि चाहिए थप शुल्क चाहिन्छ भनेर मोटै रकम असुलेका पनि पाईन्छ । यसमा भ्रम नपर्नुहोस् भिषा दिने निर्णयका लागि कुनै पनि राजदुताबासका कर्मचारीले घुस खान्छन् वा प्रभावमा पर्छन् भन्नु ठगि गर्नु हो ।
कसरी आवेद फारम भर्ने ?
युके भिषाका लागि धधध।खष्कबद्धगप।ाअय।नयख।गप मा गएर अनलाईन आवेदन फारम भरिसकेपछी त्यसैलाई प्रिन्ट गरेर भिएफएस ग्लोबलमा पासपोर्ट तथा अन्य आवश्यक कागजादका साथमा फारममा बुझाउनुपर्छ । यसरी भरिने अनलाईन फारमा विवरणहरु भर्नका लागि युके भिषा आवेदन शुरु गर्नु अगावै यहाँले आफ्नो यात्रा योजना बनाउनुपर्छ । हवाई टिकट बुकिङ्ग गर्ने, होटल बुकिङ्ग गर्ने वा आफूलाई युके बोलाउने ब्याक्ति वा संस्थाको आधिकारी निमन्त्रणा मगाउने कार्य पहिल्यै गर्नुपर्छ । यसरी अनलाईन फारम भर्दा आफ्ना परिवारका सदश्यहरुको विवरण तथा आफ्नो ब्याक्तिगत विवरणहरु समेत भर्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता जानकारीहरु आफू सामू राख्नुहोस् । आफूले भ्रमण गरेका देशहरुको सूची मिती सहित बनाउनुहोस् । तपाई युकेमा पुगेर बस्ने स्थानको ठेगाना आफू सामू राख्नुहोस् । युके भ्रमणको बजेट बनाउनु होस् अनि टिकट तथा अन्य शुल्क सम्बन्धि विवरणहरु ठिक्क पार्नुहोस् । सम्पूर्ण रकमलाई पहिल्यै पाउण्ड स्टेर्लिङ्गमा परिवत्र्य गर्नुहोस् । यि सबै जानकारी तपाईंको अनलाईन आवेदनमा भर्नुपर्नेछ । अनलाईन आवेदन पारम भर्ने क्रममा मागिएका विवरणहरुको ठिक साँचो विवरणहरु भर्दै जानुहोस् । फारम सबमिट गर्नु अगावै आफूले भरेका विवरणहरु पुनः चेक जाँच गर्नुहोस् केहि गल्ती भेटिए यहाँ सच्याउन सकिन्छ । तर, एक पटक सबमिट गरेपछी विवरण सम्पादन गर्न सकिंदैन । यसरी सबमिट गरेको फारम प्रिन्ट गर्नुहोस् र दिईएको भिषा एप्लिकेसन नम्बर अनुसार भिएफएस ग्लोबलको काठमाडौं सेन्टरमा आवेदन बुझाउने समय समेत लिनुहोस् । भिषा शुल्क नगदै भिएफएसमा बुझाउनु सकीन्छ ।
भिषा आवेदनका लागि आवश्यक समय
भिषा आवेदन दिई सकेपछी छिटोमा चार कार्य दिन र ढिलामा १५ कार्य दिनमा भिषा आवेदन सम्बन्धि निर्णय दिल्ली स्थित ब्रिटिस हाई कमिसनबाट प्राप्त हुन्छ । तर, भिएफएस ग्लोबलमा लाग्ने समय समेत जोड्दा यात्रा गर्नु करिव ३० दिन अगावै अनलाईन फारम भरेर भिएफएस ग्लोबलमा फारम बुझाउने समय लिनु बुद्धिमानी ठहरिन्छ ।
भिएफएस ग्लोबलमा आवेदन फारम बुझाउने समय लिंदा करिव तिन दिन पछीको समय प्राप्त हुन्छ ।
युके भिषा आवेदनका लागि अव तस्विर खिचाईरहनु आवश्यक छैन । भिषा फारम भरेर प्रिन्ट गरिसकेपछी विगतमा छुट्टै तस्विर टाँस्नुपर्ने प्रावधान हटाईएको छ । अव भिएफएस ग्लोबलका कर्मचारीले तोकिएको मापदण्ड अनुरुपको तस्विर वायोमेट्रिक्स लिने बेलामा त्यहिं लिनेछन् ।
के आवश्यक छैन ?
कुनै पनि कागजादलाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरिरहनु आवश्यक छैन । घर जग्गा वा कुनै पनि अचल सम्पतीको भ्यालुएसन रिपोर्ट पनि आवश्यक छैन । तपाईंको धन सम्पत्तीको आधारमा तपाईंलाई भिषा दिने होईन । तपाईं युके जाने कारण स्वाभाविक हुनुपर्छ र त्यहाँ गएर गैह्रकानुनी कार्यहरु गर्नुहुने छैन भन्ने विश्वास सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई तपाईंले दिलाउन सक्नुपर्नेछ ।
युके भिषाको निर्णयको अवस्थालाई अनलाईनबाटै ट्¥याक गर्न सकिन्छ । भिषाको निर्णय भईसकेपछी तपाईलाई स्वचालित ईमेल प्राप्त हुनेछ भने तपाईंको कागजाद तथा पासपोर्ट भिएफएस ग्लोबलको कार्यालयमा आईपुगेपछी त्यहाँका कर्मचारीले आवेदनकर्तालाई फोन गरेर जानकारी समेत दिन्छन् ।
युके भिषा स्टिकर लागेको पासपोर्ट सहित आवेदन कर्ताले दिएका सम्पूर्ण सक्कल तथा प्रतिलिपी कगजादहरु समेत व्रिटिस हाईकमिसनले भिएफएस ग्लोबलको कार्यालयमा फिर्ता पढाईदिनेछन् ।
१. हवाई टिकट रिजर्भेसन, होटल रिजर्भेसन, ट्राभल आईटिनरी
३. भिषा तथा छाप लागेका पासपोर्टका पृष्ठहरुको प्रतिलिपी
४. आफूले काम गर्ने कम्पनीबाट विदा स्विकृत गरिएको पत्र
५. तलव तथा आम्दानी खुल्ने कागजाद
६. बैंक स्टेटमेन्ट
७. स्वरोजगारका हकमा कम्पनीका कागजादहरु
८. विद्यार्थीका हकमा स्कुलबाट विदा दिईएको पत्र
९. जग्गा धनी पुर्जा वा अन्य सेयर प्रमाणपत्र का प्रतिलिपीहरु
१०. व्रिटिस हाईकमिसनलाई सम्बोधन गरि लेखिएको कभर लेटर